Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Saint Lucia » Live It: Manitatra ny fandaharana maharitra i Saint Lucia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Saint Lucia dia manasa ireo mpitsidika hiaina toy ny eo an-toerana miaraka amina fidirana marobe mandritra ny herintaona.
Saint Lucia fizahan-tany dia manolotra safidy vaovao amin'ny fandaharam-potoana hijanonana maharitra.
Saint Lucia dia mitaona aingam-panahy ireo mpandeha hilentika amin'ny kolontsaina eo an-toerana.
Safidy mifanaraka amin'ny filan'ny fianakaviana, mpiasa lavitra, arivo taona ary isaky ny mpandeha rehetra ny safidin'i Saint Lucia's Live it.
Saint Lucia fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia nanolotra safidy vaovao ho an'ny fandaharam-potoana maharitra Live Live, ho valin'ny fironana momba ny dia sy ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny mpitsidika dia afaka mandray ny fiainam-pirenena amin'ny Nosy Saint Lucia amin'ny visa fidirana marobe mandritra ny herintaona. Amin'ny alàlan'ny safidy roa amin'ny programa Live it, Saint Lucia dia mitaona aingam-panahy ireo mpandeha hilentika amin'ny kolontsaina eo an-toerana, raha mijery ny hatsaran-tarehy voajanahary ao amin'ilay toerana fialan-tsasatra maharitra na miasa am-pitiavana lavitra.
Ny programa Saint Lucia Live it dia natomboka tamin'ny 2021 tany ho any nandritra ny enina herinandro. Ho an'ireo izay mitady safidy hanao fitsidihana maro isaky ny lava, ny dingana faharoa amin'ny programa Live it dia mamela ny mpangataka hijanona mandritra ny herintaona miaraka amin'ny visa fidirana marobe amin'ny sandan'ny $ 75 USD.
Fahefana misahana ny fizahan-tany Saint Lucia's Live izany fandaharana safidy mifanaraka amin'ny filan'ny fianakaviana, mpiasa lavitra, an'arivony taona ary isaky ny mpandeha rehetra. Ny mpitsidika dia afaka manomana tsy tapaka ny fitsidihany manokana, na ny làlan'izy ireo dia azo alamina sy ampanjifaina miaraka amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny Live It izay mamorona traikefa namboarina hiasa, hilalao, hatoriana ary hisakafo amin'ny alàlan'ny concierge any an-toerana voatokana.
Raha any Saint Lucia, ny mpitsidika dia afaka miasa amin'ny fomba lavitra sy azo antoka, satria misy Wi-fi maimaim-poana atolotra manerana ny nosy amin'ny hotely, villa, ary toeram-bahoaka. Hotely maro no efa manolotra kojakoja asa lavitra sy tombontsoa manokana izay mampandanja tsara ny asa sy ny fialan-tsasatra. Ny mpangataka dia afaka misafidy safidy roa ho an'ny tena zava-misy marina:
Traikefa namboamboarina: karakarain'ny manam-pahaizana manokana amin'ny Live it Island, tsy misy fitsidihana roa mitovy! Ny fandaharam-pianarana lalina dia manome ny mpitsangatsangana làlan-kizorana lavitra hamakivaky ny tranokalan'i Saint Lucia sy ny toerana manintona azy rehetra nefa miaina toy ny eo an-toerana. Miara-miasa amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny Live it Island, ao anatin'izany ireo fialan-tsasatra Barefoot, Vacations Serenity & Tours ary St. James Travel & Tours, ireo mpitsidika dia afaka manamboatra ny lalan-kalehan'izy ireo manokana mifanaraka amin'ny filan'izy ireo sy ny zavatra mahaliana azy ireo.
Miaina izany tsy miankina: Ireo mpangataka dia afaka mangataka mivantana amin'ny Sampan-draharahan'ny fifindra-monina mandritra ny herintaona hatramin'ny visa feno amin'ny alàlan'ny famenoana ny taratasy fangatahana Saint Lucia farafahakeliny (2) herinandro alohan'ny datin'ny dia. Ireo mpangataka dia hampandrenesina ao anatin'ny 5 andro raha efa nekena tamin'ny taratasy fankatoavana vonjimaika ny fangatahana. Ny sarany visa dia azo aloa ao amin'ny seranam-piaramanidina rehefa tonga any Saint Lucia, miaraka amin'ny kopian'ny taratasy fankatoavana, hatolotra ny mpiasan'ny ladoany.